मूत्र चुहिने समस्या औधी मात्रामा देखा पर्ने गरेको छ । यो पुरुष तथा स्त्री दुवैमा देखा पर्छ । तर पनि पुरुषको अनुपातमा स्त्रीहरू यो समस्याबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । स्त्रीमा यो अवस्था जति उमेर बढ्दै गयो त्यति बढी हुने गर्छ । कैयौं स्त्रीहरू यसलाई उमेर बढ्दै गएपछि अनुभव गर्नैपर्ने अवस्था भनेर स्वीकार गर्छन् ।
त्यसमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा कम मात्रै उपचारबम निम्ति जाने गर्छन् । नेपालमा पिसाब चुहिने समस्याबाट कति प्रतिशत स्त्री पीडित छन् ? तीमध्ये उपचारका निम्ति चिकित्सककहाँ कति पुग्ने गर्छन् ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । स्त्रीमा विभिन्न प्रकारका पिसाब चुहिने अवस्था देखा पर्छन् । यो लेखमा एक्कासि पेटभित्र चाप बढेर उत्पन्न भएको पिसाब चुहिने समस्यालाई मात्र वर्णन गर्ने चेष्टा गरिएको छ ।
पेटभित्र एक्कासि चाप बढेर पिसाब चुहिने भनेको खोक्दा, हाछ्युँ गर्दा, हाँस्दा, शारीरिक व्यायाम गर्दा, भारी बोक्दा, सम्भोग गर्दा जब पेटभित्रको चाप एक्कासि बढ्छ; त्यस्तो अवस्थामा मूत्रथैलीमा पिसाब छ भने त्यो थोपा वा धाराकै रूपमा बाहिर निस्कन्छ । त्यस्तो भएमा योनीवरपर भिजेको अनुभव हुने, समयमै सफा गर्न नपाए मूत्र गनाउने, चिलाउने तथा संक्रमण हुनेजस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।
यसको मुख्य कारण मूत्रनलीको बीचको भागको प्राकृतिक झोलुंगे आधार कमजोर वा नष्ट हुनु हो । हाल शल्य विधिबाट कृत्तिम रूपमा जालीको पट्टी मूत्र नलीमुनि राखेर गुमेको प्राकृतिक झोलुंगे आधारलाई बलियो बनाएर स्त्रीलाई पिसाब नचुहिने अवस्थामा पु‍र्‌याइन्छ ।
← सावधान ! यी खानाहरु खाँदा मानिसको तत्काल मृत्यु हुन्छ
किन पिसाब रोक्न सकिँदैन ? →